नायिका निशाले सार्वजनिक गरिन् आफैँले स्तनपान गराएको तस्बिर
काठमाडौं / नायिका निशा अधिकारीले इन्स्टाग्राममा स्तनपानको तस्बिर सार्वजनिक गरेकि छिन्। उनले इन्स्टाग्राममा आफ्नो छोरा युभनलाई दुध खुवाएको तस्बिर सार्वजनिक गरेकि हुन्। उनले विगतमा पनि &lsquo;बेबी बम्प&rsquo; को फोटोहरु प्रदर्शन गर�
डिर्भोसको खबर बाहिर आएपछि यसाे भन्छिन् पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गी
काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गीको सम्बन्ध विच्छेदको चर्चा भइरहेको छ । उनले आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धमा संकटमा परेको खबर भाइरल भएपछि मिडियासँग आक्रोस पोखेकी छन् । डिर्भोर्सको समाचारमा आफ्नो सहमति नरहेको भन�
इन्डियन आइडलः नेहा कक्कडलाई प्रतियोगीले अँगालो हाले, त्यसपछि गरे चुम्बन , भिडियाे बन्याे भाइरल
सिंगिंग रियालिटी शो इन्डियन आइडलको एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ जसमा एक प्रतियोगीले जज नेहा कक्कडलाई चुम्बन गरिरहेको देख्न सकिन्छ । यो भिडियो सोनी टिभीको आधिकारिक ट्वीटर अकाउन्टमा सेयर गरिएको छ । भिडियोमा देखिए अनुसार एक प्
बलिउडमा महानायक भनेर चर्चा पाएर अमिताभ बच्चन गएको ३ दिनदेखि अस्पतालमैं हुनुहुन्छ । उहाँको कलेजोमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको परिवारले जानकारी दिएको छ । अमिताभ आफैंले धेरैपटक भनेको कुरा के हो भने उहाँको कलेजोले १००
यी हुन् संसारकै सर्वाधिक सुन्दरी
सुन्दरता मान्छेको हेराइमा भर पर्छ पनि भनिन्छ। हिजोआज भने सुन्दरताको मापन पनि वैज्ञानिक पद्धतिमा निकाल्न थालिएको छ।हालै, गोल्डेन ब्युटी अफ ब्युटीका अनुसार संसारकै सर्वाधिक सुन्दर महिलामा अमेरिकी सुपरमोडल बेला हदिद परेकी छन�
दसैँअघि काठमाडौँमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा अभिनेता राजेश हमालले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्ने मौका पाए। उनले यसपटको दसैँ धनकुटामा मनाउने तय भए पनि अन्तिम सयमा धनकुटाको कार्यक्रम स्थगित भएपछि काठमाडौँमै दसैँ मनाउने बताए।
नायिका अमिसा पटेलबिरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी , लाग्याे यस्ताे अभियाेग !
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री अमीषा पटेलविरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी भएको छ । चेक बाउन्सको अरोपमा राँची अदालतले उनलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएपछि पुर्जी जारी गरिएको थियो । फिल्म निर्माता अजय कुमारले दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ भारूको चेक बा�
नायिका दिशा पटानीको बाेल्ड अवतार
बलिउड अभिनेत्री दिशा पटानीको सुन्दर फिगरको सबैले चर्चा गर्ने गरेका छन । उनको मेन्टिनेन्सको समेत तारिफ गर्ने गर्छन् । उनी आफूले भने आफू आलुजस्तो देखिने गरेको बताएकी छिन् । पछिल्लो समय आफूले खानपिनमा ध्यान नदिएकाले आलुजस्तो ड�
पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गी र जिपी तिमल्सिनाको वैवाहिक सम्बन्ध संकटमा परेको छ।एक समय अन्तर्जातिय विवाह गर्ने रोल मोडल बनेका यी दुबैको घर झगडा बढ्दै जाँदा आ आफ्नो बाटो लाग्ने तयारीमा लागेका खबर आजको&nbsp;शुक्रबारले छापेको छ। दुई सन�
आलियालाई करीनाकाे गतिलाे सुझाव : मुसा दौडाइमा नलाग
नायिका करिना कपुरको ठूलो फ्यान हुन् आलिया भट्ट । आलिया र करिनाले एकाध चलचित्रमा एकसाथ काम पनि गरेका छन् । कुनै समय करिना बलिउडकी नम्बर १ नायिका थिइन् । अहिले आलियाले त्यो पोजिशन हासिल गरिरहेकी छिन् । &lsquo;मामी मुभी मेला&rsquo;मा एकसाथ
दर्जनौँ फिल्ममा अभिनय गरेकी अभिनेत्री केकी अधिकारीद्वारा अभिनित &lsquo;छ मायाँ छपक्कै&rsquo; फिल्म नेपालभरका विभिन्न हलहरुमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। आज प्रकाशित&nbsp;नागरिक दैनिकले &lsquo;छ मायाँ छपक्कै&rsquo;की नायिक केकीसँगको अन्तर्वार्ता छ�
अझै हाउसफुल छ ‘छ माया छपक्कै’ दुई दिनकाे कमाइ नै आश्चर्यजनक !
गत शुक्रबार रिलिज भएको यस वर्षको बहुप्रतिक्षित फिल्म &lsquo;छ माया छपक्कै&rsquo; को व्यापार आश्चर्यजनक भएको छ । शुक्रबारदेखि रिलिजमा आएको यो चलचित्रले २ दिनमा बम्पर कमाई गरेको छ । चलचित्रले दुई दिनमा ३ करोड माथिको कलेक्शन गरेको छ । रिल
अभिनेता सलमान खान किन भए दुःखी
बलिउड अभिनेता सलमान खानले हालसम्म आफूलाई कसैले विहेको प्रस्ताव नगरेको बताएका छन् । ५० वर्ष कटिसकेका सलमानको हालसम्म विहे भएको छैन । उनको विभिन्न अभिनेत्री र मोडलहरूसँग प्रेमको चर्चा भए पनि उनले फिल्मफेयरका लागि दिएको अन्तरव
काठमाडौं &ndash; फिल्म &lsquo;हेल्लो काशीराम&rsquo;को छायाँकन सुरु भएको छ । सोमबारबाट छायाँकन सुरु भएको फिल्मका कमेडी जनरामा निर्माण हुन लागेको फिल्मका निर्देशक रिम विश्वकर्मा हुन् अभिनेता दीलिप रायमाझी र नवज्योति रसाइलीको मुख्य भूमिक�
काठमाडौं । अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अभिनेत्री पुजा शर्मा एकदमै चर्चामा रहेको नाम हो । यो बीचमा उनले लिने पारिश्रमिक पनि चर्चाको विषय बन्छ । केहि वर्ष अगाडीसम्म लाखको एकल अंकमा सिमित कलाकारहरूको पारिश्रमिकको अंक केहि सम
उमेर ढल्केपछि मञ्जुकाे पीडा.....
बजारमा तीजको माहौल छ। दिनहुँ दर्जनौँ तीजका गीतहरू सार्वजनिक भएका छन्। यस्तै सन्दर्भमा गायिका तथा प्रस्तोता मञ्जु पौडेलको मौलिक तीज गीत &lsquo;नाच्छु घुमेर&rsquo; सार्वजनिक भएको छ। हरेक तीजमा मौलिक तीजको भाका लिएर आउने पौडेलले यसपालि
सराेज अधिकारी भन्छन – अब कमेडी फिल्म खेल्ने रहर छ !
काठमाडौं/&nbsp;अहिले हामीले पाएका प्रोजेक्टमा म व्यस्त छु । त्योभन्दा बाहेकको काम गर्ने सम्भावना नै छैन । फिल्मका लागि पनि सामान्य अफर त आइरहेका छन्, तर मलाई समय छैन ।साथै, म आफू फिल्मका लागि तयार हुन अझै बाँकी नै छ । आफूलाई तयार प�